Ngokungangabazeki, sonke ngesikhathi esisodwa noma kuyoke kwenzeke ukubhekana inqubo efana yokubhaliswa encwadini umsebenzi. Le nqubo akubona bonke kakhulu, futhi eziningi izizathu lokhu. Eqinisweni, ukubaluleka le nqubo, zama ukuthola ukuthi ngokuningiliziwe kulesi sihloko.
Ngakho ake ngiqale indaba ekuqaleni. Ukubhaliswa umsebenzi irekhodi ikhadi - akalutho kodwa njengoba kudingekile. Kungani? Yebo, ngoba ngoba lutho kusuka ebuntwaneni esiye satshelwa ukuthi lena incwadi ebalulekile kakhulu umsebenzi komuntu, kanye Inkomba ubudala isisebenzi njengoba uchwepheshe. Lokhu Usitshele abazali, kushiwo emthethweni.
Lapho umuntu iqala ukusebenza okokuqala, into yokuqala umqashi ubophekile ukuba uqale futhi kuholele isisebenzi kule dokhumenti ezibalulekile. Ukwenza irekhodi amathuba emisebenzi kumele kwenziwe ngosuku lwesihlanu ngemva yokwemukela emsebenzini. Lo mthetho awusebenzi abaqashi abangabantu abangabodwana zemvelo, futhi esimweni lapho ikontraga ne pluralists zemininingwane yezinye izinkampani noma izinhlangano.
Umqashi noma abantu bayo abagunyazwe yibo buthakathaka ubophekile ukuba enze ukuba irekhodi umsebenzi umsebenzi ulwazi ngamunye kwabasebenzi. Endabeni itoho , lokho kwaziswa kutholakala oyifakile ku yindawo wokuphila kwabantu, futhi kuphela isicelo sakhe. Konke okufakwayo zidalwe okusekelwe idokhumenti, elikwaziyo ukuze uqinisekise ukutholakala itoho. Ngokuvamile, leli phepha ukuze bangabhekani kuyinto yokuqala isitifiketi umsebenzi nazo zonke izimvu zamanzi ezifanele futhi amasignisha, kanye kokuba ngosuku oluthile. Ngaphezu kwalokho, isifiso esinjalo kufanele kuboniswe kuphela ngesimo isitatimende esibhaliwe.
Ukwenza incwadi umsebenzi kumelwe uqale khona ngekhava ukugcwaliswa ishidi. Ekhasini efanayo kufanele kube isignesha ezithile ebusweni, okuthi unesibopho elikhiphe umsebenzi izincwadi futhi, yebo, ngaphambi kokuba kunyatheliswe ibhizinisi. igama umsebenzi ngaphandle izifinyezo, ngonyaka kanye nosuku lokuzalwa, imfundo, umsebenzi noma umsebenzi: Futhi kule dokhumenti, ulwazi olufana kufanele inikezwe. Futhi, umlando umsebenzi ngempela kumele abe isignesha yomnikazi njengoba isiqinisekiso ulwazi olungenhla. Lonke ulwazi ukugcwalisa zabasebenzi othathwe imiculu (passport, amadokhumenti emfundvweni, futsi njalo njalo).
Njengoba ubona, ekwakhiweni ncwadi umsebenzi - inqubo kunalokho sina futhi kudingekile. Kodwa kukhona izimo ukuthi umuntu kufanele ukukhipha iyimpinda idokhumenti. Umthetho icacisa izimo lapho kungenzeka ayiswe sakhe. Ngakho, encwadini umsebenzi sizonikeza akumiselelwa uma kukhona irekhodi ukuxoshwa noma ukudlulisa kwesinye isikhundla encwadini yomsebenzi, uma ngabe sisebenti ilahlekelwe ngokwayo idokhumenti, noma benza izikhulu enhlanganweni. Futhi mpinda ikhishwa uma ibhuku umsebenzi ubudala walahlekelwa ifomu efanelekayo. Ngokwesibonelo, ashiswa, amanye ezimanzi, nokunye.
Ukwenza okubili ncwadi umsebenzi senzeka ngesisekelo amadokhumenti asekelayo ubudala, noma ngesisekelo odlule irekhodi umsebenzi, uma yokugcina ngasinda. Futhi, inothi "Impinda" lapho wenza iyimpinda ekhoneni phezulu ikhasi lesihloko Kuphoqelekile.
Ukwahlukanisa imali eyiphinda yamabhizinisi kanye nesabelomali